२२ बैशाख, २०७७ – Mero UK
Day: २२ बैशाख, २०७७
२० अर्ब बजेट अर्थमा फिर्ता, बजेटअगावै डेढ खर्ब वैदेशिक ऋणको प्रतिवद्धता
२२ बैशाख, २०७७ २२ बैशाख, २०७७ / अनलाइन खबर
२२ वैशाख, काठमाडौं । चैतसम्म पनि ठेक्का नलागेका र काम गर्न नसकिने अवस्थामा पुगेका कार्यक्रम तथा आयोजनाबाट बजेट फिर्ता गर्ने क्रम बढेको छ । यस्ता आयोजनाले ‘आत्मसमपर्ण’ -सरेन्डर० गर्ने नीति बनाएअनुसार हालसम्म २० अर्ब रुपैयाँ हाराहारी बजेट अर्थ मन्त्रालयमा फिर्ता आएको छ । सरकारले बजेट कार्यान्वयन गर्न बनाएको कार्यविधि अनुसार चैत मसान्तसम्म खर्च नभएको र …
२० अर्ब बजेट अर्थमा फिर्ता, बजेटअगावै डेढ खर्ब वैदेशिक ऋणको प्रतिवद्धता Read More »
२३ वैशाख, काठमाडौं । संघीय राजधानी काठमाडौं उपत्यकाका बासिन्दा लकडाउनमा बसेको सोमबार ४२ दिन भयो । लकडाउनपछि धादिङका एक पुरुष र सनसिटी अपार्टमेन्टमा बस्दै आएका आमा छोरामा संक्रमण भेटियो । उनीहरु निको भएर घर फर्किसके । नयाँ संक्रमित नभेटिएको २२ दिन भयो । विदेशबाट संक्रमण बोकेर मानिसहरु काठमाडौं आउने सम्भावना पनि छैन । अन्तराष्ट्रिय उडान …
काठमाडौंमै अल्मलियो सरकार ! लकडाउन लम्ब्याउने, टेस्टचाहिँ नगर्ने Read More »
२३ वैशाख, काठमाडौं । आरएनए एक्ट्रयाक्सन किट नहुँदा भैरहवास्थित प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा कोरोना परीक्षण रोकियो । कोशी अस्पतालमा अटोमेटिक मेसिन बन्द भयो । जुल्लास्थित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पनि जडान भएको पीसीआर मेसिन सञ्चालन हुन सकेन । कोरोनाको बढ्दो जोखिमका कारण मध्यपश्चिममा निषेधाज्ञा लगाउनु पर्ने अवस्था आइसक्यो । पश्चिमका सीमा सिल गर्नुपर्ने स्थिति आइसक्यो । …
सिंगापुरमा किट छ, सरकार रित्तै ! Read More »
मासु र पशुपन्छीबारे सरकारले भ्रम फैलायो : भेटेरिनरी एशोसिएसन
२२ वैशाख, काठमाडौं । नेपाल भेटेरिनरी एशोसिएसनले कोरोना संक्रमणका बेला माछा-मासु, अण्डा र पशुपन्छीबारे सरकारले भ्रम फैलाएको आरोप लगाएको छ । सोमबार एक विज्ञप्ति जारि गर्दै संघले माछा-मासु, अण्डाको प्रयोग र मानिसले पशुपन्छीसँगको असुरक्षित सम्पर्कबाट टाढा रहने सूचना भ्रामक तथा पुष्टीहिन तथ्य भएको आरोप लगाएको छ । ‘नेपाल सरकारका आधिकारिक निकायहरु, » पुरा समाचार पढ्नुहोस
२२ वैशाख, खोटाङ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार देशभरि २२ हजार ९७८ जना क्वारेन्टाइनमा छन् । यो संख्या देशभरि उपलब्ध बेडभन्दा आधा कम हो । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाका अनुसार कुल ४९ हजार १४४ वटा बेड छन् । तीमध्ये २६ हजार १६६ बेड खाली छन् । यतिका धेरै बेड किन खाली त …
क्वारेन्टाइनमा बस्नेको शर्त : दैनिक रक्सी र मासुभात चाहियो ! Read More »
मलेसियामा पनि आममाफी, परराष्ट्रमन्त्री भन्छन्– खाडीबाट ३५ हजार नेपाली फर्किंदा ठूलो चुनौती हुन्छ
२२ वैशाख, काठमाडौं । कुवेतपछि मलेसियाले पनि लकडाउनकै समयमा आममाफीको प्रक्रिया सुरु गरेको छ । मलेसियाले १४ दिने सूचना निकालेर आममाफीको प्रक्रिया थालेको परारष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिएका छन् । कुवेतले थालेको आममाफी प्रक्रियामा ३५ सय नेपाली सहभागी भएर अहिले स्वदेश फर्कने अनुमति कुरिरहेका छन् । यसअघि साउदी अरेबियाले पनि आफ्नो देशमा कार्यरत अवैध कामदारलाई …
मलेसियामा पनि आममाफी, परराष्ट्रमन्त्री भन्छन्– खाडीबाट ३५ हजार नेपाली फर्किंदा ठूलो चुनौती हुन्छ Read More »